प्राथमिक बजार छैन रित्तो तीन कम्पनीको धितोपत्र विक्रीमा - Aarthiknews
काठमाडौं । हाल प्राथमिक धितोपत्र बजारमा तीन कम्पनीको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनमा रहेको छ । कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंक र नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको ऋणपत्रसँगै एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्र हाल सार्वजनिक निष्काशनमा रहेको हो ।
कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकले माघ ७ गतेदेखि १५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको हो । कम्पनीले १ बराबर १ दशमलव ५ कित्ता शेयरको अनुपातमा रू. ३० करोड बराबरको ३० लाख कित्ता हकप्रद शेयर विक्री खुला गरेको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २० करोड रहेको छ । संस्थापक तर्फ ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण तर्फ ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको यस कम्पनीको हकप्रद पश्चात चुक्तापूँजी रू. ५० करोड पुग्नेछ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी रू. ६४ करोड र जारी पूँजी रू. ५० करोड रहेको छ । हकप्रद पश्चात कम्पनीको जारी पूँजी बराबरको रकम कायम हुनेछ । यो हकप्रद शेयर माघ २७ गतेसम्म विक्रीमा रहने जानकारी कम्पनीले दिएको छ ।
त्यस्तै नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकले पुस ७ गतेदेखि शतप्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले माघ १२ गतेसम्म उक्त हकप्रद शेयर विक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले १ बराबर १ को अनुपातमा रू. १३ करोड १२ लाख ३३ हजार ८०० बराबरको १३ लाख १२ हजार ३३८ कित्ता हकप्रद शेयर विक्री खुला गरेको हो । हाल रू. १३ करोड १२ लाख ३३ हजार ८०० चुक्तापूँजी रहेको बैंकको हकप्रद शेयर निष्कासन पश्चात यो पूँजी रू. २६ करोड २४ लाख ६७ हजार ६०० पुग्नेछ ।
प्राथमिक बजारमा माघ ३ गतेदेखि एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको वार्षिक ८.५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणपत्र समेत सार्वजनिक निष्कासनमा रहेको छ । बैंकको ऋणपत्रमा छिटो अवधि माघ ६ गतेसम्म माग बमोजिम आवेदन नपरेपछि ढिलो अवधि माघ १७ गतेसम्म विक्री खुला गरिने भएको हो । बैंकले ‘एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र, २०८६’ नामको प्रतिकित्ता रू. १ हजार अंकित दरका रू. २ अर्ब बराबरको २० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो ।
कुल कित्तामध्ये रू. ८० करोड बराबरको ८ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री हुनेछ भने बाँकी रू. १ अर्ब २० करोड बराबरको १२ लाख कित्ता भने बैंक आफैले व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गर्ने जानकारी दिएको छ । सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ४० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ ।
यो ऋणपत्र खरिदका लागि न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यी धितोपत्र खरिदका लागि सम्बन्धीत कम्पनीहरुको विक्री प्रबन्धकसँगै सी–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिनेछ । नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको हकप्रद शेयर विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकको हकप्रद शेयर विक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट र एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्र विक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।